Marqaati oo Xisbiyada Siyaasadda la Saxiixday Heshiis Daacadnimo | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Heshiiska daacadnimada ee xaqiijinta doorashooyin xor ah oo loo siman yahay waa hindise oo ay marqaati ula dan leedahay in ay kula dagaalanto musuqmaasuqa dhaca xilliga doorashooyinka, in la dhiso is aaminaad u dhaxeeya xisbiyada siyaasadda iyo in la xaqiijiyo in doorashooyinka danbe ay ahaadan kuwo sidaan ka sharciyad badan oo ka xorriyad badan.
In kastoo dawlada aysan aqoonsaneyn xisbiyada siyaasadda, hadane xisbiyada dhab ahaan bay u jiraan waxaa ayna ka qeyb qaataan siyaasadda dalka.
Inta badan mudaneyaasha baarlamaanka ee hada jira waxa ay ka tirsan yihiin xisbiyo siyaasadeed, in kastoo aysan dawladda xisbiyo weli aqoonsan. Waxaa dhici jirtay in shaqsiyaadka qaar ay xisbiyadooda u gadi jireen kuraasto baarlamaanka. Heshiiskan waxaa uu xaqiijin doonaa in xisbiyada aysan kuraas u gadin xubnahooda iyo in ay soo sheegaan hadii ay arkaan dhacdooyin walba oo ku saabsan cod iibsi.
Hirgelinta Heshiiskan wuxuu xaqiijin doonaa in uu dhaco kalsooni lagu qabo xisbiyada iyadoo ay cadaan doonto halka xisbiyada uu uga yimaado taageerada maaliyadeed, lacagaha ay ololaha doorashooyinka ku isticmaalaan, iyo wakiiladooda siyaasadeed. Sidoo kale, marqaati waxay xisbiyada siin doontaa taageero xaga tababarka ah, iyo in ay ka caawiso in ay gaarsiiyeen dadweynaha iyo dadka codeeyn doono 2016 fariimo ku aadan dhibaatada uu cod gadashadu u leeyahay aayaha danbe ee dalka.
Tirada guud ee heshiiska saxiixday waxa waayay 28 xisbi: 28ki Janaayo ayaa marqaati waxa ay qabatay kullan ooda loogu qaaday ololaha xisbiyada siyaasadda loogu bandhigayay in ay saxiixaan Heshiiska. Isla maalintaas waxaa saxiixay Heshiiska 14 xisbi iyadoo 2 xisbi ay ka cudur daarteen in ay Heshiiska saxiixaan. Inta u dhaxeysay 28 Janaayo iyo 22 Febraayo waxaa Heshiiska saxiixay 11 xisbi.
3 xisbi waxa ay saxiixeen heshiiska 23 Febraayo. 2 xisbi ayaa weli ka fikiraya in ay saxiixaan heshiiska. Sidoo kale, laba xisbi baa saxiixday 28 Febraayo iyo 31 Meey.
Qeeybtaan saxiixeyaasha soo kordha baa lagu xusi doonaa.
Muxyadin Maxamed oo ka mid ah saxiixeyaasha waxaa la dilay labo todobaad kadib marki uu Heshiiska saxiixay. Waxaan tacsi u direeynaa qooyska, qaraabada, iyo saaxiibada uu ka tagay Allahana sabar iyo iimaan ka siiyo.
Hoos waxaa ku xusan liiska xisbiyada saxiixay heshiiska iyo shaqsiyaadka u saxiixay. Waxaa xiga bogga laga saxiixay Heshiisyada.
GOBOLKA HIIRAAN – Soomaalida Ohio iyo Taageeridda shirka dib u heshisiinta ee G/ Hiiraan The People of Freedom ( Xisbiga Xuriyadda )